အစ္စလာမ့်ထီးရိပ်အောက်မှာ…စုစည်းညီညွတ်စွာ…ရပ်လိုက်ကြပါစို့… UNITY in DIVERSITY | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeအစ္စလာမ့်ထီးရိပ်အောက်မှာ…စုစည်းညီညွတ်စွာ…ရပ်လိုက်ကြပါစို့… UNITY in DIVERSITY
အစ္စလာမ့်ထီးရိပ်အောက်မှာ…စုစည်းညီညွတ်စွာ…ရပ်လိုက်ကြပါစို့… UNITY in DIVERSITY
April 10, 2017 drkokogyi
ဒီလိုအဖြစ် ဖြစ်လာဖို့ အလှမ်းဝေးနေဆဲပါ
ကျနော်တို့ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်
အများကြီး ပြု ပြင်ရဦးမှာပါ
သေချာတာကတော့
ကျနော်တို့ ဘုံရပ်တည်ချက်တခုခုနဲ့
လက်တွဲ အလုပ် လုပ်နိုင်မှာမဟုတ် သလို
ဒီကနေ့…ဒီအချိန်…ဒီအခါမှာ…ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ မိမိ နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာ အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်တွေ.တူညီစွာ လက်ခံ ယုံကြည်ထားတဲ့သူတွေအချင်းချင်း…
သာ…ကိုယ်ပိုင် သည်းသန့် ဘာသာရေးဝတ်ပြု မှု တည်ဆောက်ကြဖို့…လိုနေပါပြီ…(Religious Islam is personal).
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို…ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ပြီး..နည်းလမ်းပေါင်းစုံကနေ…တိုက်ခိုက်ရန်ရှာခံနေရတဲ့အရေးတွေကို…ဆောင်ရွက်ကြတဲ့နေရာမှာ…မိမိတို့…စွဲမြဲကျင့်သုံးနေကြတဲ့…ဘာသာသာသနာရေးစံတွေ…ကျင့်သုံးမှုတွေကို…ရှေ့တန်းမတင်ကြဘဲ..အကီဒဟ် ဓတူသူများ ဘာသာ ဓတူသူများ
ဦးတည်ချက်တခုထဲအတွက်…တဆူထည်းသော…ကိုးကွယ်ရာအရှင်…အလ္လာဟ်အတွက်…မွတ်စလင်အားလုံးအတွက်…လူတိုင်းလူတိုင်း…မွတ်စလင်တိုင်း…မွတ်စလင်တိုင်း.. အလုပ်လုပ်ကြရမယ်….All for One…One for All…ဆိုတဲ့…လမ်းစဉ်အတိုင်းပေါ့….
ကိုယ်လဲ…အစ္စလာမ်…အခြားသူများလည်း…အစ္စလာမ်တွေဖြစ်ကြတယ် ( အ ကယ် ၍ ခါးသည်းစွာဖြင့် အခြားသူများကိုအစ္စလာမ် ဟုလက်မခံနိုင်
← Myanmar Buddhists insulting Islam. လူကမွေးပြီး ခွေးစော်နံနေသူများသို့
ဘာသာရေးနွယ်တဲ့ အတွေးအခေါ်တရပ် နိုင်ငံရေးလောကထဲကို ဝင်လာခဲ့ရင် အလွန်ပဲ ရွံရှာစက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ် →